Ma ogeyd ... Trisquel? | Laga soo bilaabo Linux
Maxwell | | Qaybinta, GNU / Linux
Waxaan ku bilaabaynaa taariikh yar:
Markii aan ka hadlayno 100% software bilaash ah, waxaan si caadi ah ula xiriirnaa isla markiiba Richard Stallman, aabaha mashruuca GNU iyo falsafada software-ka bilaashka ah. Sidaad arki doontaan, isaguna door buu ku lahaa qaybintaan. Kahor jiritaanka qeybinta lacag la'aanta Stallman ma uusan hubin nooca qeybinta ee lagu talin lahaa, maadaama dhammaantood ay lahaayeen xoogaa software-lahaansho ah, xilligaas wuxuu adeegsan jiray Debian. Ilaa jiritaanka Ututo, qaybinta yar ayaa loo tixgeliyaa inay sameysmayso kaliya la free software...
Trisquel GNU / Linux wuxuu bilaabay jidkiisa Universidad de Vigo Halkaas Spain fog, waqtigaas oo ku saleysan Debian, waxaa si rasmi ah loogu soo bandhigay Dhismaha Polytechnic ee Orense Campus sanadkii 2005, iyadoo joogitaanka Stallman uu marti ku ahaa, waxay siisay khudbad qiiro leh kuwii markaas ardayda sayniska kombiyuutarka. Kici sida baahida loo qabo in la abuuro OS bilaash ah iyo Galician.
Trisquel wuxuu ku jihaysan yahay inuu yahay 100% nidaam hawlgal oo bilaash ah oo si fudud loogu isticmaali karo isticmaalaha guriga, waa ku saleysan Ubuntu laga soo bilaabo daabacaadda 2.0; iyadoo ay taasi jirto ayay leedahay keyd kuu gaar ah iyo keydka macluumaadka (sida xirmooyinka Debian). Astaanteedu waa astaamaha 'Celtic' ee triskelion, in kasta oo runta tani tahay seddex jibaar Debian ah oo ku midoobay xarunta, amaanta yar ee mashruuca Debian iyo shaqadooda. Xilligan hoggaamiyaha iyo horumariyeha ugu weyn waa Ruben Rodriguez.
Kombuyuutarradeedu waa Gnome, in kasta oo ay sidoo kale leedahay nooc leh LXDE (Trisquel Mini) oo weli ku jira horumarka. KDE, Xfce iyo maareeyayaasha daaqadaha caanka ah sidoo kale waa lagu rakibayaa kaydinta, ama rakib nadiif ah oo saxannada ah netinstall.
Dhanka kale, waxay leedahay 4 nooc oo kala duwan:
Trisquel: nooca ugu weyn, ee ku habboon isticmaalaha caadiga ah; fududahay in la isticmaalo oo la rakibo.
Trisquel Edu: kaas oo loogu talagalay in lagu isticmaalo xarumaha waxbarashada, ayaa ka muuqda LTS agtiisa. Waxaa ku jira xirmooyinka waxbarashada iyo nidaamka maareynta fasalka.
Triskele Pro- Loogu talagalay ganacsiga, xisaabinta, maaraynta, naqshadeynta garaafka, iyo xirmooyinka xafiiska. Sida nooca Edu, waxay kaliya ka muuqataa LTS.
Trisquel Mini: nooca iftiinka ee Trisquel. Waxay leedahay LXDE asal ahaan iyo codsiyo kale oo miisaanka fudud ah, oo loogu talagalay in loogu isticmaalo buugaagta netka iyo kombiyuutarada leh ilaha yar.
Ku saleysnaanta Ubuntu waxay dhaxashaa sahlanaanta rakibidda, xirmooyinka, iyo xasilloonida. Waxay isticmaashaa kernel bilaash ah oo Linux ah, taas oo aan lahayn xayndaabyada binary-ka ee firmware. Falsafadeeda darteed, looma adeegsanaayo barnaamijyo gaar ah ama darawallo, iyo golaheeda wax taageero ah oo ku saabsan qalabka lahaanshaha sidoo kale laguma talinayo codsiyada aan lacag la'aanta ahayn.
Sida Debian oo kale, waxay kaloo leedahay nooc ka mid ah biraawsarka Firefox maadaama aan loo tixgelin in lagu taliyo: Ciraaq.
In kasta oo ay haysato horumariyeyaal tiro yar, haddana waxay leedahay bulsho sii kordheysa oo adeegsadayaal ah, waana mid ka mid ah qaybinta yar ee ay FSF iyo ku talin mashruuca GNU isticmaal.
Waxay leedahay dhowr nidaam oo taageero ah oo loogu talagalay dayactirka qaybinta, sida tabarucaad iskaa wax u qabso ah oo loo maro Paypal, nidaam xiriir, iyo a dukaanka hadiyadaha oo leh maqaallo kala duwan oo la xiriira Trisquel.
Bilaash ayuu ku baxayaa
Khibrada Trisquel waxay u dhigantaa qaybinta kasta waxayna u furantahay fursado kaladuwan iyadoo kuxiran nooca isticmaalka aad siiso. Laakiin haddii aad leedahay qalabka aan lagu taageerin kernel bilaash ah Waxaan u maleynayaa inaan lagugula talin adiga. Mana kuu oggolaanayso inaad rakibto codsiyada lahaanshaha, mana taageerto.
In kasta oo, haddii isticmaalka kombuyuutarka maalin kasta uu yahay qalab xafiis, in lagu qabto hawlo, naqshad yar ama barnaamij; Trisquel wuxuu si buuxda u dabooli karaa baahiyahaaga.
Tusaale ahaan, kiiskeyga waxaan kaliya u isticmaalaa kumbuyuutarka inaan ku sameeyo xoogaa shaqooyin ah, oo aan ku qoro Abiword, boostada, waxaan ku ciyaaraa gurguurta 'Roxterm', waxaanan dhageystaa muusikada qaarkood. Waxaan u adeegsadaa Midori inuu yahay biraawsarkayga, xayeysiiskiisa iyo Gnash si fiican ayey ugu shaqeeyaan adeegsiga shabakadda. Uma baahni inaan haysto barnaamijyadi ugu dambeeyay, ama kuwa cusub, waa sababta aan u adeegsado nooca 'LTS'.
Laakiin waayo-aragnimo kastaa way ka duwan tahay, iyo sida aan u isticmaalo shakhsi ahaaneed waa uun waxa aan u baahanahay. Laga yaabee qaar Dareem "xaddidan" ama xoogaa wareer ah in aadan heli karin qalab gaar ah oo ka shaqeeya.
Waa hagaag, ragga, tanna waxay ku soo gabagabeyneysaa dib-u-eegiddan kooban, waxaan rajeynayaa haddii aadan ogeyn inay taasi kaa caawin karto inaad nadiifiso shakigaaga. Oo haddaad horay u taqaanay iyada, ha ka waaban inaad isku day, Waxaan hubaa inaadan ka qoomameyn doonin.
Mar dambe ayaan aqrinnaa, salaan dhammaan.
Bogga rasmiga ah: http://trisquel.info/es
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Ma ogeyd ... Trisquel?
Ku salaysnaanta Ubuntu waxay dhaxashaa sahlanaanta rakibidda, xirmooyinka, iyo xasiloonida
Hahaha markaa sidaan u dhaxlo xumaantaas waan tagnaa.
Ubuntu waad u malayn deggan?
Mararka qaarkood waxaan u maleynayaa in Canonical uu kuu shaqaaleysiiyay xayeysiin. Waxaan salka ku hayaa "'waxa fiican in ay ka hadlaan mid, xitaa haddii ay xun tahay." Waxaad kor u qaadaysaa Ubuntu inta aad awooddo. Faallooyinkaaga waxaad ku dhiirrigelineysaa xiisaha kuwa aan aqoon u lahayn waxaadna ku dhiirrigelisaa ubunteros inay sii wadaan difaacidda qaybinta ... hubaal way ku siinayaan 😛
Hagaag, ogow in waxa aan raadinayo ay yihiin wax iska soo horjeed ah, oo aan distro la isticmaalin
Haa, haa ... taasi waa waxa aad qoreyso laakiin ficiladaadu waxay soo jeedinayaan wax kale XD.
Haha sifiican hada wixii ka dambeeya waxaan dhihi doonaa in waxyaabaha aan jeclahay ay yihiin shit ay u adeegsadaan.
Miyaanay fiicnayn inaad hadalka iska joojiso? 😛
Fuck Annubis, had iyo jeer waa isku mid adiga oo lab ah
Hagaag, waxay ila muuqataa mid xasiloon, waa qaybinta oo sida ugufiican ula qabsatay kombuyuutaradayda; Xitaa waan ku dhiiran karaa inaan dhaho waxay sifiican iiga shaqeysay marka loo eego Debian lafteeda.
Arrinka dhadhanka, haddii aysan kula muuqan, waan ixtiraamayaa. Iyada oo leh ixtiraam buuxda oo geesinimo leh, uma dulqaadan doono dabeecadda noocaas ah ee idinka timid.
Waa inaan idhi wax aad u culus.
Waa hal shay in la dhaho "Ubuntu ma xasilloon", taas oo ah wixii aan iri, iyo wax kale oo la yiraahdo "Ubuntu waa wax xun", oo aanan dhihin.
Eeg, ma aqaan duruufahaaga iyo wax la mid ah runtiina waan ixtiraamayaa habka aad u fikirto. Laakiin haddii aad qori doontid wax xudduud ah, waxaan kaa codsanayaa fadlan ugu yaraan ha ku qorin "taas" qoraalladayda.
Aniga waan kafiicsanahay maxaa yeelay ma jecli inaan doodo.
Haddii adiga taasi tahay mid xun, aan tagno
HAHAAHA waa la jarjaray
Waan aqaanay Trisquel tan iyo markii la soo bandhigay (mahadcelinta udhawda munaasabada) iyo inkasta oo ay ila muuqato inaan ahay qaybsi heer sare ah (mid ka mid ah kuwa ugu fiican falsafadiisa) anigu ma isticmaali karo maxaa yeelay waqtiyadaan siyaasadeeda adiga ayaa xaddidaya sidoo kale badan.
Hadda, dhammaan kuwa dhaha waxaan ku raacsanahay 100% Stallman waa inay adeegsadaan tan ama mid lamid ah. Laakiin munaafaqnimo badan ayaa jirta. Waan cadahay in softiweeriyada lahaanshuhu ay lagama maarmaan tahay (waqtigan) oo kaliya caan ka ahaanshaha GNU / Linux ayaa joojin kara baahidaas.
Hagaag, waxaan u maleynayaa inaysan aheyn sida loo baahan yahay sida ay rabaan inaan aamino.
Maxaa dhici lahaa haddii dhammaan isticmaaleyaasha "dagaalladu barakaysan yihiin" oo si toos ah uga qaylinaya waxyaabaha kale ee bilaashka ah, maalin uun, mid keliya, ay u shaqeeyaan sidii bulshada ay yihiin?
Xaqiiqdii adduunku wuxuu ahaan lahaa meel ka sii wanaagsan. Dhanka kale, marka la adeegsanayo softiweer lahaansho, waxa kaliya ee la qabtay waa in la sii wado iyadoo ku tiirsan iyaga, iyaga la siiyo awood; taasina taasi igama dhigeyso wax qosol leh gabi ahaanba. Munaafaqnimo, malaha; Laakiin haddii aynaan "gelin baytariyada" sida ay ku yiraahdaan waddankayga, markaa goorma?
Qalabka sameeya qalabka ayaa kaliya ka fikiraya tan: ($) _ ($). Si kasta oo ay beeshu u midaysan tahay, waxa lagu xisaabtamayaa waa tirada dadka isticmaala. Si aan caan u noqonno waxaan u baahanahay softiweer gaar ah (sida darawalada). Waa inaan u isticmaalnaa iyada oo ujeedadu tahay inaan soo jiidano dadka caadiga ah (ma ahan sharaf dhac). Iyada oo leh saldhig wanaagsan "macaamiisha" waxaan ku riixi karnaa qalab bilaash ah in la sameeyo ama ugu yaraan si loo hagaajiyo wadayaasha lahaanshaha.
Waddo kale (oo ay Chango u muuqato inay tilmaamayso) ayaa ah in la horumariyo kooxo wata qalab bilaash ah oo rajo laga qabo inay guuleystaan. Markaa waan ka boodnay baahida loo qabo ilaaliyaal lahaansho.
Nooc kasta oo uu yahay, ujeedada FSF waa in bulshada loo beddelo mid xor ah. Waxaan ku celinayaa, BULSHADA. In beeshu ay inbadan isu timaado, salaaxida dhabarka, dhaleeceyso banaanka,… taas waxaan ku maareyneynaa inaan ilaalino goobaabin xirxiran oo xidido yeelan doonta isla markaana dhalin doonta karkarimo nacasnimo ah oo aan faaido lahayn.
Sidaad u leedahay, waxa iyaga muhiim u ah waa lacag.Maxaad ka faa'iideysaa inaad haysato isticmaaleyaal fara badan laakiin ugu dambeyn qof walba wuxuu u maleynayaa in lahaanshuhu yahay "lagama maarmaan" si uu u awoodo inuu adeegsado nidaamka? isticmaaleyaal badan ayaa durba tilmaamaya inay leeyihiin macaamiil badan, oo cunay wixii la siiyay; Waxba uma qalanto in ay jiraan qaar badan maadaama aysan mudneyn marka ay yar yihiin adeegsadayaasha iyo "khubaro" kuwaas oo horeyba u doorbiday waxyaabaha gaarka ah una tixgeliya "lagama maarmaan."
Taasi waa sababta ay muhiimadu tahay fikirka, markay dadku ka warqabaan muhiimada ay leedahay Software inay Bilaash tahay, isbedelkooda ku yimaada Nidaamka Xorta ah wuxuu noqonayaa mid otomatik ah oo hadii uusan jirin taageero bilaash ah ma iibsan doonaan qalabkaas luuqadaasna waa la fahmi doonaa by soosaarayaasha.
Ma jiri doono wax isbeddel ah illaa dadku (inbadan ama inyar) yiraahdaan "Ku iibin maayo ilaa aad isiiso waan doonayaa", laakiin haddii ay sheegi doonaan «Ok Waxaan u maleynayaa inaan hadda nahay koox ballaadhan, miyaad u beddelaysaan wixii ay na siiyeen ee aannu doonaynno, fadlan? Mise waan tagnaa oo dad badan ayaan raadsanaa? ».
Waxaan doonayay inaan wax idhaahdo laakiin adigu goor horeba waad wada sheegtay.
Sii wadida adeegsiga softiweerkan ayaa ah waxa iyaga ka dhigaya "lama huraan" taasi oo kaliya iyaga siinaysa awood.Sidaa darteed, sidee bay u filayaan mucjisada inay dhacdo inay noqdaan Xor (ama in Horumar Free)?
"Caannimada" GNU / Linux waxba ma qabato, kaliya isticmaalka "Linux" kuma filna.
Ma aqaano waxa uu ula jeeday munaafaqnimada, haa way jirtaa, laakiin sidaa ku dhig sadarkaas waxaad moodaa inuu ka hadlayo mid kale (maahan kan aan ogahay).
Trisquel waa dhagax adag, waxayna ogaataa heshiis wanaagsan oo qalab, illaa iyo inta aad haysato darawallo bilaash ah. Hadda, waxaan door bidaa isticmaalka SalixOS (oo ku saleysan slackware), sababo dhadhan awgood, sidoo kale ma arko xumaanta in iniinyaha ay leeyihiin burooyin, illaa iyo inta aysan soo dirin macluumaadka shakhsiyeed, ama aysan sameynin waxyaabo wasakh ah (Had iyo jeer waan la socdaa) warka ay ka hadlayaan Bios ama qalabka wax u dhimaya amniga, qalafsanaanta fudud, aragtida shirqoolka, ama sax?). Xaqiiqdii, dagaalka weyn ee sanadaha soo socda waa Qalab Bilaash ah: si kasta oo aad u isticmaasho 100% softiweer bilaash ah, qaybta jirku wali waa mid gaar ah ... Taasi waa sababta aan ugu maleynayo in kuwa naga mid ah ee adeegsada Linux ay wax u qabtaan. taas oo dhaafsiisan xukumida gabal sida "bilaash ama bilaash." Waxaan ku iri.
Way fiicnaan laheyd in lagu saleeyo Debian oo aan aheyn Ubuntu. Inaad isticmaasho mid ku saleysan (hooyo aan ahayn) waxaan door bidaa inaan isticmaalo midka ku saleysan Ubuntu.
Waa hagaag, waxaad leedahay Venenux, 100% distro bilaash ah oo leh KDE oo ku saleysan Debian. Kuma talin lahaa inaad isticmaasho Ubuntu maxaa yeelay waxay ka kooban tahay software-lahaansho, laakiin waan ixtiraamayaa dhadhankaaga.
Venenux wax yar lama istaagin?
Maaha wax aad u badan. Way nooshahay ugu yaraan.
maqaal aad u wanaagsan .. laakiin xagee kala soo bixi kartaa .. si aad tijaabo u sameyso?
Waxaad kala soo bixi kartaa bogga rasmiga ah
In kasta oo aan kugula talin lahaa inaad sugto Brigantia, oo la sii dayn doono maalmo yar gudahood.
Waxaan la wadaagayaa fikradda 100% software bilaash ah waxaanan u maleynayaa in haddii qof uu xiiseynayo isticmaalka software bilaash ah, waa inuu marka hore hubiyaa: http://www.h-node.org/hardware/catalogue/es si loo arko in qalabka si fiican ula socdaa 100% distro bilaash ah.
Waxaan isku dayay xilli xilli weyna socotaa. Aad u dhakhso badan oo fudud. Lama sheegin in astaamaheeda ay ka mid tahay inuu xambaarsan yahay iniin waqtiga dhabta ah. Sidoo kale, waxay umuuqataa in xarkaha bilaashka ah, maadaama aysan lahayn wadayaal lahaansho, ay aad ufudud badan yihiin. Xawaaraha xawaaraha waxaa kaliya lala barbardhigi karaa archlinux.
Sida loo rakibo softiweer lahaansho, wax dhibaato ah kuma qabin qalabka wax lagu iibiyo (aad uma xasuusto haddii aan ku rakibey meel lagu keydiyo). Waxaan u maleynayaa in dhibaatada weyn ay la socoto kaararka wifi ee aan la taageerin iyo sidoo kale sawirada.
Waxaan u adeegsadaa Trisquel arrin mabda 'ah (siyaasad, fikrad, shirqool, wax alla wixii aad rabto inaad ugu yeedho) runtiina waa inay deggan tahay. Dhanka kale, iskama dhihi karo isla Ubuntu iyo maadaama aanan hubin micnaheeda mid ka mid ah distoorku inuu ku saleysnaado mid kale, waxaan ka shakisanahay in cayayaanka Ubuntu ay qayb ka yihiin "waayo-aragnimada isticmaale", laga yaabee inay u fududee kala guurka dadka reer Windous ama maxaan ogahay.
Xaqiiqdu waxay tahay inaanan wax dhib ah qabin tan iyo markii aan rakibay, qiyaastii seddex bilood ka hor, iyo waxa kaliya ee aan joojiyay isticmaalkiisa (kahor intaanan isticmaalin Debian) waa Adobe flash player, oo wali nuugaya, darawalka Nvidia graphics (crap) iyo koodhadhyo fara badan oo aan bilaash ahayn, kuwaas oo aan looga baahnayn Trisquel.
Waa nasiib wanaag inaanan sidaa u cuqdad qabin ka hor intaanan isku deyin.
Hagaag, waxay kuxirantahay Ubuntu macnaheedu waa (waxyaabo kale) inay adeegsadaan xirmooyin isku mid ah oo kujira keydka distoorka Koonfur Afrika. In kasta oo aanan garanaynin sida ay u shaqayso Trisquel, iyo bakhaarrada ay isticmaasho. Haddii aanad wax dhibaato ah kala kulmin barahan, waxaan kaliya kuu sheegi karaa: Hambalyo!
Kaliya waxaan qabaa su'aal .. Browser-kaas aad isticmaasho ABrowse r, xagee ka heli karaa? Maxay ku saleysan tahay?
Waa nooc ka mid ah biraawsarka Firefox (Maxwell ayaa dhigaya booskiisa).
Waan ku faraxsanahay inuu quudhsado darawalka lahaanshaha iyo qaabab lahaanshaha Nvidia. Waan u baahanahay iyaga (sidoo kale wifi sidoo kale).
Trisquel waxay leedahay bakhaarro u gaar ah, baakidhkeeda waxay ku saleysan tahay Ubuntu, kaliya iyada oo aan lahayn barnaamijyo bilaash ah. Haddii aad rabto inaad isticmaasho Abrowser waxaad ka raadin kartaa halkan:
Ma jiro nin, maahan inaan dareemo inaan adeegsanayo, laakiin waa inaanan waxba ka ogeyn. Ma isiin kartaa faahfaahin dheeraad ah? Ma lihi marinka that
Ah, waxaan u maleynayaa inaan xasuusto inyar ka hor anigoo raadinaya buugag, waxaan ka aqrinayay bogga Debian ku saabsan go'doominta Cuba. Waan ka xumahay, waan iska hilmaamay arrintaas.
Waxaan u dhigay sharaxaadda sida ay u leedahay mashiinka raadinta xirmada:
ABrowser waa nooc aan la aqoonin oo ka tirsan shabakadda caanka ah ee Firefox. Waxay ku qoran tahay luqadda XUL oo loogu talagalay inay noqoto mid fudud oo iskutallaab ka samaysan.
Kani waa sarbeebeed diirada lagu saaray xirmada ugudambeynta ugudambeysa ee qeybintaada. Fadlan ha ka saarin haddii aad rabto inaad si otomaatig ah u hesho cusbooneysiin muhiim ah xirmadan mustaqbalka.
Marka la soo koobo, ABrowser waa waxa Iceweasel u yahay Debian. Browser biraale ah oo ku saleysan Firefox, in kasta oo aad sidoo kale rakibi karto GNU Icecat, oo ku dhowaad isku mid ahayd.
Shakhsiyan, uma adeegsado maxaa yeelay waxay iila muuqataa mid aad iigu culus, oo sidaan idhaahdo, ku-tiirsanaanta yar ee ay leedahay, ayaa ka sii wanaagsan. Taasi waa sababta aan u isticmaalo Midori.
Salaan iyo i cafi xusuusteyda xD
Waa Abrowser, fargeeto ah Mozilla Firefox (oo la mid ah Iceweasel iyo IceCat). Waxay ila tahay aniga in si khaldan loo qoray ama ay tahay wax kale oo u dhigma qaabka raadintaada. Ma aqaan sida ay taasi u shaqeyso.
Jahannamo, anigu waxaan ahay qofka kaliya ee aan xiiseyneynin qeybin ka timid. Miyaad rabtaa qeybinta bilaashka ah? Miyaad isticmaashaa debian oo dhamaadka keydadka waxay dhigeysaa "bilaash". Waana intaas, hambalyo Richad Stallman iyo wax walba !! Debian wuxuu lahaa "qandaraas bulsheed" ilaa 15 sano waana fuliyaa: http://www.debian.org/social_contract.es.html
Ma ahayn wax sidaa u adag! Ma que trisquell ni gsence ama wax kastoo loogu yeero.
Debian-ka waxay taageeraan software-ka lahaanshaha isla markaana Stallman ma jecla taas. Laakiin haye, hadda oo aan ka fikiro, yaa bios bilaash ah ku haysta kombuyuutarkooda? Dhammaanteen waa lanagu dhaleeceeyay.
Richard wuxuu ku leeyahay Lemote Yeelong. Kumbuyuutarka kaliya ee leh BIOS Bilaash ah
Haa, Stallman had iyo jeer wuxuu ku hogaamiyaa tusaale.Ma jiraa qof kale oo leh YeeLoong 8101B?
Ma ogi. Intaa waxaa dheer, waa in laga dalbadaa soo-saaraha.
Debian xor maahan oo ku filan, oo liddi ku ah qandaraaskeeda bulshada, waxay taageertaa qalabka lahaanshaha waxayna leedahay xarumo lagu rakibo softiweer bilaash ah. Mashruuca Trisquel wuxuu diiradda saarey nooc isticmaale ka duwan kan Debian isticmaali lahaa.
Taasi waxay ka dhigaysaa rakibis bilaash ah, laakiin distro-ku wuxuu sii wadaa inuu u qaybiyo softiweer bilaash ah.
Waxaan isku qoraa faallooyinka Haaruun ee goobta h-node. Dhibaatooyinka ay soo jeedisay FSF (sida trisquel) waxaa loogu talagalay dadka jecel inay dhisaan kombuyuutarkooda. Laakiin kuwa ka doodaya Linux, waxay noqon kartaa mid qarow ah
Iga raali noqo hadaad u malaynaysid inaan samaynayo "is-hadal".
Waan aqriyay gelitaankaas maalintiisa (aad ufiican) waana ku fahmay sifiican. Laakiin aan ku nuuxnuuxsanno in goobta 'Trisquel forum' ay isku dayaan inay noqdaan kuwo iswaafajiya, markaad qorto, falcelintoodu waa macquul.
Sida barta h-node, anigu ma heli karo sabuurada (ama Motherboard-yada) xagee ku yaalliin?
Ma laha tikidho. Tani waa tan ugu dhow.
Waxaan isticmaalaa debian main, oo isku mid ahaa, 100% bilaash ah
Marwalba waan layaabi doonaa sababta aysan u dhigayn websaydhka rasmiga ah ee mashruuca markay ka hadlayaan wax, xayaysiinta, haddii la sameeyo, waa inaad si fiican u qabataa xD
Anigu aad baan u xiiseynayaa nidaamka la soo jeediyey laakiin nasiib daro kumaba rakibi karo kumbuyuutarkayga sababo la xiriira khilaafaadka qalabka, waxaan marwalba taageere u ahaa NVIDIA GPUs laakiin muuqaalka teknolojiyadda Optimus ayay iga reebaysaa ciyaarta aniga oo leh distros sidan ah, waad ku mahadsantahay xogta si kastaba, salaan.
Trisquel waa sharaf. Waxaan qiyaasayaa in haddii aysan aqoonsan qalabka qaarkood ay iska cadhaysiin karto, laakiin waxaan ku rakibay mashiinno badan weligayna igama dhicin aniga, laga bilaabo GPU illaa daabacaadda, wax kasta oo si otomaatig ah u socda oo aan dhibaato lahayn.
Xuubka binary-ka lama xakamayn karo, sida wax kasta oo ikhtiyaari ah, qofku wuxuu ku kalsoonaan karaa oo keliya 'cidda siisa'. Xitaa iyada oo aan laga fiirsan darxumada anshax ee software-ka lahaanshaha, xagga amniga waa wax aan la sii wadi karin.
Laga soo bilaabo waayo-aragnimadayda: Waxaan kugula talinayaa isku day Trisquel ka dibna la hadal. Waxba iima siin wax aan ka ahayn qanacsanaanta, anshax iyo farsamo labadaba.
Dhaqan Bilaash Ha Noolaado!
ubuntu bilaash ah dijo
Trisquel dhuuqmada waxyaalaha badankood ma shaqeeyaan waxay la mid tahay inaad yeelato baal alwaax alwaax ah oo aad casri u socoto waxaana kaliya suurtogal ah in waxqabadka ugu yar laga helo kombiyuutarka waa wadajirka distroska, xorriyadda waxay ka kooban tahay awood u lahaanshaha xulashada iyo marka mid ka mid ah disto uu jecel yahay trisquel ayaa kaliya kuu ogolaanaya inaad ku shaqeyso softiweer "bilaash ah", waa uun nidaam kale oo TOTALITARY sida Windows ah.
Ku jawaab ubuntufree
Dhammaantiin waad salaaman tihiin! Runtu waxay tahay inaan aad ugu qanacsanahay isbedelka aan ku sameeyay u beddelashada Trisquel, oo hadda ku socota nooca 6 oo leh taageero ballaadhan muddo shan sano ah. Kahor intaanan isticmaalin ubuntu, laakiin waxaan awoodey inaan ka ogaado buug-gacmeedka (tusaale ahaan, buugga stallman ee ku saabsan sababta ay software-ka u noqonayso mid bilaash ah) iyo ku-habboonaanta isticmaalka 100% softiweer bilaash ah, waxaana u maleynayaa inayna faa'iido anshax, laakiin sidoo kale heerka isticmaalaha.
Waan fahamsanahay in dadka qaar ay diidi karaan waana la fahmi karaa, laakiin kiiskeyga si fiican ayuu iigu adeegay.
Jihada qaybinta qaar ka mid ah qalabka Linux, oo ay ku jiraan softiweeriyada lahaanshaha, waxay ila tahay ilaa xad in la dhihi karo, oo lid ku ah waxa software-ka bilaashka ah micnaheedu yahay, iyada oo aan lahayn xuub-dhismeedka aasaasiga ah ee nidaamka, ama laba-geesood lahaansho, kaas oo sida hal isticmaale ku yiri Kor ku xusan oo aan xusuusan magaciisa xilligan, fiilada flash-ka ma ahan oo keliya mid dhiman, oo waxay ku dhowdahay inuu duugoobo, laakiin sidoo kale waxay dirtaa xogta cidda garaneysa meesha. Teknoolojiyaddu waa aalad iyo softiweer bilaash ah wuxuu ku siinayaa suurtagalnimada inaad gacanta ku hayso mashiinka oo aadan u wareegin dhinaca kale, sida software-ka lahaanshuhu sameeyo, tanna waxaa jira danaha cadaadiska lagu saarayo inuu sii socdo iyadoo kuxiran barnaamijkan adduunka kombuyuutarka. sayniska maanta.
(Haddii aadan ilaalin Flash, sharciga maraqa)
Ku saabsan Trisquel, waxaan la hadli karaa oo keliya yaabab. Anigu waxaan ahay nin cusub halkaan, xitaa ma aanan isticmaalin Linux distros muddo 6 bilood ah, iyo xiisaha wanaagsan awgeed, waxaan doonayay inaan isku dayo Trisquel (6.0), wax walbana waxay ahaayeen kuwo aad u fiican: xallin, cod, WIFI !!!! ... Ma ahi taageere AMD, waxaan door bidayaa Intel waxaanan filayaa inuu 100% la qabsaday laptop-ka my. Waxay uun iga xanaajisaa xoogaa, meelaha qaarkood oo aan booqdo oo adeegsada tooshka, oo si fududna ugu jirin Trisquel, waxaan raadiyay wax walba ... siraad sixir ah, greasemonkey, iwm.
Waxaan uga haray Opensuse 12.3, maxaa yeelay waxay ila tahay inaanan diyaar u ahayn, inaan qaato u heellanaanta anshaxeed, ee dadka adeegsada distoorku ay qaateen, xitaa sidaas oo ay tahay sacab, dadaalkooda, iyo goorta tallaabadaas, ugu dambeyn , Aad ayaan u cadeeyay, taas oo aan dooranayo ro.
Waad salaaman tahay, laga yaabee inay aniga i dhaleeceyn doonaan, laakiin haysashada kombuyuutar aanad awood u lahayn inaad ku rakibto barnaamijyada aad ugu jeceshahay inaad raacdo barnaamijyada hadda jira ee waxtarka u leh waxtar badan ma leh.
Waan fahamsanahay in Windows uu isku dayayo inuu "adeegsado" isticmaaleha, isagoo u diraya macluumaadka dhinacyada saddexaad, wuxuuna metelaa baarka maadaama uusan ahayn barnaamij bilaash ah, laakiin uu ku haysto shati gaar ah Laakiin BARNAAMIJYADA KU SHAQEEYA Windows (badankoodu waa bilaash) waa kuwa ka dhiga mid waxtar leh. Waa barnaamijyadii.
Ok Trisquel waa bilaash, waana mid xasilloon. Laakiin waxtar ma leh in la rakibo, maxaa yeelay ma taageerto mp3 ama codsiyo lahaansho leh, laakiin kuwa runta u shaqeeya
Ma aqaano sababta qaar horumariyayaashu u arkaan barnaamijyada "lahaanshaha" kuwo xaasidnimo ah. Waxaa jira barnaamijyo lahaansho oo aad u wanaagsan, oo aan macluumaad aan idman u dirin dhinacyada saddexaad.
Anigu ma rakibi doono trisquel on my pc. Waxaan haystaa kaar garaaf ah, waxaan u iibsaday si aan ugu isticmaalo. Ma ahan inay ka dhamaadaan darawalada.
Hadda, waxaan isticmaalaa Windows 10, oo ay weheliso BURG oo ay weheliso Ubuntu. Waxaan u qaabeeyey kan dambe inaanan u dirin macluumaad layaab leh oo ku saabsan raadinta midnimada.
PC waa inuu noqdaa mid faa iido leh, si uu noola qabsado, ee maahan inaan la qabsano.
Mid kasta dijo
Ku habboon, aniga ahaan, waa inaan u adeegsado Dabo dusha USB. Wax walba way shaqeeyaan, kumbuyuutar kasta.
Jawaab Cid Kasta
La sii daayay Rekonq 0.9 (Wararka, faahfaahinta, iwm)